Axmed Jaamac:- Haddii aan ahaan lahaa Sirdoon Reer galbeedka ah xaajadu sidaa ma aysan sii ahaan laheyn ee waa leyga been sheegayaa – idalenews.com
Milkiilaha Maqaayadda The Village ee Magaalada Muqdisho Mr.Axmed Jaamac, ayaa waxa uu ka hadlay Qaraxyadii laba maalin ka hor lala eegtay Maqaaxidiisa, waxa uuna sheegay in hadalkii kazoo yeeray Alshabaab ee ahaa inuu Axmed yahay Sirdoon ay tahay mid waxkama jiraan ah, sida uu hadalka u dhigay.
Mr.Axmed Jaamac ayaa waxa uu si cad u beeniyay inuu ka tirsan yahay Sirdoonka dowladda Ingiriiska oo ay ku eedeysay Kooxda Al-Shabaab oo sheegatay qaraxa oo ay ku dhinteen 18-qof oo rayid ah.
Axmed Jaamac ayaa tilmaamay inuu dalka dib ugu soo laabtay si uu ugu qeyb qaato dib-u-dhiska dalka iyo shaqo u abuurista dhallinyarada, isla markaana uusan wax xiriir ah la laheyn siyaasadda gudaha iyo dibadda.
Sidoo kale, Mr.Axmed Jaamac Wuxuu sheegay in khasaaro uu kala kulmay qaraxyada lala eegtay maqaayaddiisa, laakiin waxyeelladaas aysan saameyn ku yeelan doonin howlihiisa shaqo.
Ugu dambeyntii Mr.Axmed Jaamac waxa uu ka digay in la baabi’iyo Shacbiga Khasaaro iyo qorshe isaga lala damacsan yahay awgii, waxa uuna Tilmaamay in Shaqadiisu ay sideeda usii socon doonto bacdamaa uu taageero ka heysto Shacbiga iyo Xukuumadda Somalia.